Sony kuzoletha PS One futhi PS2 amageyimu PS4 - Izindaba Rule
Sony kuzoletha PS One futhi PS2 amageyimu PS4
Ngokungafani Playstation 3 (PS3) ukulingisa, okuzokwenziwa phethwe ukude on Playstation Manje intanethi, imidlalo for consoles ngaphambili Sony sika Playstation njengeziyingxenye yohlu lwezincwadi zeBhayibheli abanye uyophathwa bangakini by an injini ukulingisa.
Ngokuvumelana ne Eurogamer, the emulators ngeke nje nokuzala imidlalo Classic yesikhathi esidlule, kodwa futhi upscale nabo ngendlela ukuthi ngeke kuholele kubo ekubeni lokudlela ukufiphala njengoba esikhathini esidlule. Umqondo for an “HD Ukuqaqada” on the fly kuyoba sikhange ngokwengeziwe kubantu ezisebenza abasebenzisi kuka isevisi ifu ukuthi asetshenziswayo ukuze basekele PS3 imidlalo.
Kucatshangwa ukuthi kwafakwa iziqu ngeke PlayStation Network eze ngesikhathi, nokuthi izici eziningi uzobe ziphindaphindwe on Playstation Now. Nokho, ngenxa ephansi kwesikrini definition imidlalo amadala, kubaluleke kakhulu ukusebenzisa amandla okwandisiwe PS4 ukuba ubuyekeze imidlalo ezingeni elemukelekile.
Lokhu kuphakamisa lo mbuzo, uma Sony ni kwenta lomsebenti kuyintfo for asebebadala console imidlalo, kungani-ke uzibophezele service ifu PS3 kwafakwa iziqu? Ngokusobala impendulo yimali, njengoba kungcono ithuba abalandeli ogama izimfanelo Sony extolls e samanje PS4 umkhankaso wokudayisa yayo ukukhokhela imidlalo PS3 popular lonke futhi.
Njengoba Moodys kuye kwanciphisa isimo credit Sony sika kadoti, Japanese ubuchwepheshe giant ukuthola izindlela ezingaphezu ukusizakala the fanbase eziqotho PS3 yayo imidlalo aduduze. Khonamanjalo, yinqwaba engenamsebenzi PS3 akwazi ukugcina optical udoti charity izitolo in the UK. m
Lesi sihloko, Sony kuzoletha PS One futhi PS2 amageyimu PS4, is yedlanzana kusukela obuzayo futhi posted lapha nge imvume.
27675	2 Uhlu PlayStation 3 imidlalo, PlayStation, Playstation Network, Sony
← Ngubhongoza Teen Guilty ngobufebe Ring 25 Wonder Foods zokuthuthukisa Umzimba Wakho →